Iindaba-Indlela yokuKhula kweMpompo yaManzi ye-Aquarium kunye nePompo yaManzi elanga
Ukukhula Kwendlela yokuPhuza amanzi e-Aquarium kunye nePompo yaManzi elanga
Ngokubhekisele kwinkampani YUANHUA, isebe lethu le-R & D lihlala liphuhlisa iimveliso ezintsha, ezihlangabezana neemfuno zabathengi ezahlukeneyo kwiimarike zasekhaya nakwamanye amazwe.
Ukumangaliswa kwethu, Ukuchaphazeleka yintsholongwane entsha yesithsaba, ishishini lomthombo wobugcisa be-aquarium kunye neemfuno zemarike yelanga zomelele kulo nyaka, kwaye ngendlela, iimpompo zamanzi e-aquarium kunye neempompo zamanzi elanga zikhulile kule meko.
Iimpompo zamanzi nazo ziyachaphazeleka kulo bhubhane. Imveliso yamazwe amakhulu avelisa ubhedu emhlabeni yehlile, kodwa imfuno yobhedu yase China inyukile. Ucingo lobhedu yeyona nto iphambili ekrwada yeempompo zamanzi, okukhokelela ekwandeni kweendleko zokuvelisa zeshishini lokumpompa amanzi.
Ukunqongophala kwamandla kunye nongcoliseko lokusingqongileyo kuyeyona micimbi ibalulekileyo ekufuneka isonjululwe kuphuhliso loluntu lwanamhlanje. Ukude
Iingxaki zokufuya izilwanyana kunye namanzi okusela kwisithili zihlala zithintelwa yimida yengingqi - ngokweengxaki ezingentla, impompo yamanzi ye-photovoltaic ivela njengoko amaxesha efuna njalo.
Kweli phepha, umgaqo osisiseko kunye nolwakhiwo lwenkqubo yokumpompa amanzi i-photovoltaic ishwankathelwe, kwaye inkqubela phambili yophando kunye nenqanaba lenkqubo yempompo yamanzi iyaxoxwa, eli phepha lixoxa lihlalutya ulwalathiso lophando olulandelayo lwempompo yamanzi ye-photovoltaic eli phepha lihlalutya ukwenzeka kunye nezibonelelo zentlalo zempompo yamanzi ye-photovoltaic, ithemba lesicelo kwenkqubo yempompo yamanzi ye-photovoltaic ilindelwe.
Inkqubo yempompo yamanzi yelanga yelanga yenziwe ngemodyuli yebhetri, iyunithi yokulawula intambo, iimoto, impompo, umbhobho kunye nevalve. Umgaqo osisiseko wenkqubo yokumpompa amanzi photovoltaic kukusebenzisa iseli yelanga ukuguqula amandla elanga abe ngamandla ombane, emva koko uqhube imoto ukuqhuba impompo yamanzi ye-photovoltaic ngomlawuli. Inkqubo yempompo yamanzi ye-Photovoltaic inokusetyenziswa kakhulu emanzini ebantwini nakwimfuyo kwiindawo ezingenambane, ukunkcenkceshela kwezolimo kunye neendawo zokusasaza eziphakamileyo ezinjengeziqithi zemida kunye nabalindi. Kwiminyaka yakutshanje, ngenxa yokwanda kobunzima "bengxaki yokutya" kunye "nengxaki yamandla", iye yanconywa ngokuthe chu njengeyona mveliso yokuhlanganiswa kwemizi-mveliso ukusombulula ingxaki yomhlaba olinywayo osebenzayo, ukuphucula imveliso nokutshintsha amandla eefossil ngokucoceka. Amandla Yimodeli entsha yezoqoqosho kuphuhliso olubanzi lwamashishini emveli afana nokugcinwa kwamanzi kwezolimo, ulawulo lwasentlango, ukusetyenziswa kwamanzi emakhaya kunye nokubaleka kwamanzi edolophini. Impompo yamanzi ye-Photovoltaic isebenzisa amandla asisigxina avela elangeni. Isebenza ekuphumeni kwelanga kwaye iyayeka ukutshona kwelanga. Ayifuni ukubekwa esweni ngabasebenzi. Ayifuni ioyile yedizili kunye negridi yamandla. Ingasetyenziselwa ukunkcenkceshela nge-drip, ukunkcenkceshela kokunkcenkceshela, ukunkcenkceshela kokungena kunye nezinye izibonelelo zokunkcenkceshela. Inokonga amanzi kwaye yonge umbane, kwaye inciphise kakhulu iindleko zotyalo-mali lwamandla ezinto ezingasasebenziyo. Ayinangxolo, akukho kungcoliseka kwendalo, akukho ukusetyenziswa kwamandla aqhelekileyo, ngokuzenzekelayo, ukuthembeka okuphezulu kwenkqubo ezimeleyo. Yimveliso yesicelo samandla amatsha kunye netekhnoloji entsha "yengxaki yokutya" kunye "nengxaki yamandla" isisombululo senkqubo ebanzi. Kangangexesha elide, bekukho imbalela encinci